Amb.Dahir Gele “Awooda xafiiskeeyga qof iga sareeya ma qaadan karin qof iga hoseyana kuma dhiiran karin” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Amb.Dahir Gele “Awooda xafiiskeeyga qof iga sareeya ma qaadan karin qof iga hoseyana kuma dhiiran karin”
Ahmed weheliye Gaashaan 4 October 2019 4 October 2019
Wasiirkii hore ee wasaarada warfaafinta ambasator daahir maxamuud geele oo manta ka qeebgalay madasha WACYI FORUM ayaa ka dhawaajiyay wax yaabihii ugu weynaa ee keenay in uu iska casilo xilkiisa suaalo dhoowr ah oo ay dadka weydiiyeen ayuu kaga jawaabay halkaas.
Maxaa keenay in aad is casisho ma waxaad ogaatay in xilka lagaa qaadi rabo?
Ambasator daahir maxamuud geele “ Dowladeeyda waxaan hubaa in ay ku qanaacsaneed shaqadeeyda sidaa wax u wadano ay la dhacsanaayeen xiriirkeena shaqsiga ah ma xumaan siyaasada kaliya Ayaan ku kala aragti duwanhay,
Iyagu waxeey aaminsanyihiin in ay dadka ka adkaadaan sudidas ayeena rabaan lakin aniga waxaan aminsanhay dadka in lala hishiiyo. Aragti ay maamul goboleedyada kaleeyhiin mid kaduwan Ayaan qabaa aniga .
Waxeey aaminsanyihiin in somaliya waryaa wax ku leedahay halka aan anigana aaminsahay in somali walaaloow wax ku leedahay, kala aragti duwanaantaas mooyee xumaan kale ayna jirin.
Waxuu kalo sheegay inta uu xilka ka tagin in dowlada ay aad ugu qancsaneed sida uu shaqada u wado lkn aragtida ay aminsanyihiin ay sababtay in uu is casilo.
Qaabka dalka loo hogaminaayo iyo qaabka ay wax u wadeen Ayaan ku qanci waayay, awooda xafiiskeeyga leeyahay qof iga sareeya ma qaadan Karin qof iga hoseyana kuma soo dhiiran Karin.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta ambasator Dahir Geele ayaa sidoo kale sheegay in aragtida maamul goboleedyada ay ka aaminsanyihiin ay kamid tahay sababaha keenay inuu iska casilo xilka waxuuna sheegay in xukuumadan maamul goboleedyada ay u aragto wax lagu kala furaayo dowladnimada Soomaaliya.
waxuu yiri” maamul goboleedyada waxaan u arkaa in ay yihiin hanaan isku keenaayo soomaalida iyo iftiin magaala walba kasoo bilaabanaayo ilaa uu isku xero magaalada kale.
Cumar filish” Xilalka dowlada Waxaa loo Fududeeyay Ciyaalka xaafada.